Traintravel မော်ကွန်း | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဗြိတိန်နိုင်ငံ. မြို့တော်သည် ခရီးသွားများနှင့် ဒေသခံများအတွက် ပျော်ရွှင်စရာများစွာကို ထုပ်ပိုးထားသည်။. Big Ben နှင့် London Eye မှ Westminster Abbey နှင့် Buckingham နန်းတော်အထိ – လန်ဒန်မှာ သွားလည်စရာနေရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။. ထို့နောက်တွင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဗိသုကာလက်ရာလည်း ရှိသေးသည်။, ညဥ့်ဘဝ, အရသာရှိသော…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အလှဆုံးသဘာဝတရားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, အချိန်အားဖြင့်နဂိုအတိုင်း, များမှာ 10 ကမ္ဘာလှည့်လည်ရန်အလှဆုံးရှေးဟောင်းမြို့များ၏. ဥရောပမှတရုတ်အထိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှေးဟောင်းမြို့များသို့, ဒီခရီးစဉ်ဟာအလယ်ခေတ်ကနေကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အထိပုံပြင်တွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်. မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အများဆုံးဖြစ်သည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပရှိချစ်စရာကောင်းသည့်မြို့ဟောင်းအဟောင်းများသည်ဥရောပ၏သမိုင်းကြောင်း၏အံ့သြဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထူးဆန်းသောအိမ်များ, မြို့လယ်ခေါင်ရှိအထင်ကြီးလောက်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ, ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောနန်းတော်များ, နှင့်ဗဟိုရင်ပြင်ဥရောပမြို့ကြီးများ၏မှော်မှထည့်ပါ. အဆိုပါ5အများဆုံးချစ်စရာကောင်းဟောင်း…